Utu Okpokoro Isi Akpadoro Echiche echiche maka ụmụ agbọghọ - Atụmatụ Echiche Tattoos
1. Ụcha akpụkpọ ụkwụ Sugar na-egbu egbu n'akụkụ ala nwanyị
Ụcha ọbara ọbara na-acha uhie uhie na nke acha odo odo na-enye aka dị egwu n'aka nwanyị.
2. Red, Blue na green sugar skull tattoo na nwanyi ụkwụ
Ọcha kachasị mma maka ụkwụ ụmụ nwanyị na-amasị ya.
3. Ihe osise dị ka tattoo tattoo skull tattoo na ogwe aka nwanyi
Ụdị egbu egbu a dị egwu n'ihi na a na-ese mmetụta.
4. Okpokoro okpokoro okpokoro na rose na ụkwụ ụmụ nwanyị
Okpara kachasị mma maka ya, nke ahụ nwere ike ime ka ọ dị ọcha na ụkwụ.
5. Ogbugbu okpokoro isi na 4 Roses na ogwe aka nwanyi
Ọnwụ ahụ pụrụ ịbụ akụkụ kasị mma nke ahụ ya
6. Ogbugbu okpokoro okpokoro dị n'akụkụ aka nri nke nwanyi na azụ n'akụkụ
Ọnwụ ahụ jupụtara n'akụkụ aka nri nke azụ ya nke dị oke mma.
7. Ụdị okpokoro okpukpu kachasị na-egbuke egbuke maka nwanyị nile
Egbu a na-ekpuchi akụkụ nile nke azụ nwanyị na-eji mma mara mma.
8. Ogbugbu okpokoro isi okpukpu kacha mma na nku n'elu azụ nwanyi
Ugo na akpu na-enye aka kachasị mma n'akụkụ azụ nke n'olu na n'elu azụ nke nwanyi.
9. Ogbugbu okpukpu isi nke okpukpu okpukpu isi na nwanyi aka
Okpara kachasị mma na ogwe aka aka ekpe nke nwere ọtụtụ agba na-enye anya pụrụ iche.
10. Egwu egbuke egbuke mara mma na ogwe aka nwanyi
Nke a bụ egbucha mara mma nke nwere ike ime ka aka ya mara mma.
11. Ụdị akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ na-egbu egbu na-egbuke egbuke n'ahụ nwanyị n'elu azụ.
Ọnwụ ahụ dị egwu n'ezie ma na-achọ nwanyị azụ.
12. Ogbugbu okpokoro okpokoro zuru ezu maka aka nwa agbọghọ ka onye agha
Nke a bụ egbucha zuru oke nke na-ekpuchi akụkụ nile nke ogwe aka nwanyi.
13. Ogbugbu okpokoro okpukpu okpukpuchi na aka aka nwa
Ihe kachasị mma shuga na-egbuke egbuke si n'aka onye agha gaa n'aka.
14. Ọnwụ maka n'akụkụ azụ nke nwa agbọghọ
Ọcha kacha mma maka nwa agbọghọ iji mee ka akụkụ ya mara mma.
15. Kasị mma okpokoro okpukpu kacha mma nke jupụtara na okooko osisi na ogwe aka nwa agbọghọ
Ogbugbu kachasị mma iji kpuchie ogwe aka ahụ dum.
16. Eji egbuke egbuke na-egbuke egbuke maka ụmụ agbọghọ
Ọnwụ ahụ dị mma n'ahụ ụmụ agbọghọ.
17. Ogbugbu okpokoro okpokoro dị na azụ nke otu nwa agbọghọ
Ọnwụ ahụ na-eme ka akụkụ azụ ya dị mma ma dị mma.
18. Di na nwunye kachasị mma maka egbugbere ọnụ nke nwa agbọghọ
Kpoo akpụkpọ ụkwụ shuga zuru oke maka abata ụkwụ nke nwa agbọghọ
19. Ihe kacha mma na-egbuke egbuke okpokoro shuga na akụkọ dị ka imebe maka aka nwa agbọghọ
Nke a bụ egbu egbu kachasị mma maka ogwe aka nwa agbọghọ.
20. Kpochapụ isi okpokoro okpokoro kachasị maka nwanyi azụ n'akụkụ aka nri
Okpara kacha mma maka obere oge nke azụ maka ya.
21. Ụdị kacha mma maka ụkwụ ụmụ nwanyị
Ọnwụ ahụ zuru okè iji nye aka mara mma maka ụkwụ nwanyi
22. Ọkpụkpụ akpụkpọ ụkwụ shuga kachasị egbuke egbuke maka ogwe aka nwa agbọghọ
Egbu kachasị mma maka ogwe aka nwa agbọghọ n'ihi na ọ na-enwu gbaa.
23. Okpu egbuke egbuke kachasị mma na azụ ya.
Ọnwụ ahụ nwere ike ịbụ nhọrọ zuru oke nke ya.
24. Etu egbucha mara mma maka azụ nwanyi
Nke a nwere ike ịbụ nhọrọ kachasị mma maka akụkụ dị elu nke nwanyị azụ.
25. Okpu egbuke egbuke kachasị mma na mkpụmkpụ okpukpu abụọ n'elu ebe azụ nwata
Ọnwụ ahụ na-enye anya zuru oke n'azụ nwanyị.
26. Ụdị akpụkpọ ụkwụ okpukpu abụọ zuru okè na nke a pụrụ ịtụkwasị obi maka ogwe aka nwanyi
Ihe kacha mma na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke n'ahụ nwa agbọghọ iji mee ka ọ mara mma.
Tags:akwara isi egbugbu maka ụmụ agbọghọ
egbu egbu mmiriakara ntụpọudara okooko osisin'olu oluUche obimma tattoosegbu egbu egbundị mmụọ ozimehndi imeweegbu egburip tattoosechiche egbugbuegbu egbu osisi lotusazụ azụagbụrụ eboGeometric Tattoosegbu egbu maka ụmụ nwokeegbu egbu okpuNtuba ntugharina-egbu egbuAnkle Tattoosaka akaegbugbu maka ụmụ agbọghọarịlịka arịlịkangwusi pusiokpueze okpuezeụkwụ akakoi ika tattooegbu egbu hennaakwara obizodiac akara akaraọdụm ọdụmegbugbu egbugbuegbu egbu diamondndị na-egbuke egbukeegbu egbu ebighi ebienyi kacha mma enyiụmụnne mgbuakpị akpịdi na nwunyeegwu egwunnụnụọnwa tattoosaka mma akaEgwu ugoenyí egbu egbuỤdị ekpomkpaaka akaima ima mmana-adọ aka mma